Tena aleo tsy hifanaraka mihitsy e!
2009-02-27 @ 22:44 in Politika
Voalohany: raha tsy dia salama loatra ny fonao ianao aza mamaky ity lahatsoratra ity aza fady indrindra. Nahavariana ry zareo, fahatsapana ny ahy, fa maro tamin'ny mpomba ny andaniny sy ny ankilany no faly kokoa aza raha vao tapaka teo iny dinika iny. Izaho ihany koa dia tsy resy lahatra velively amin'izay ho vokatry ny fifanarahana mivoaka eo fa io marimaritra iraisana tsy voafehin-dramalagasy io foana no mba ventesina mandrakariva eto, filaminana tsy mitombina no hivoaka avy ao satria tsy manaiky fifangaroana velively izay efa namoy havana mbola mafana fo amin'ny fitolomana. Izaho ihany koa tsy mety levon'ny vavoniko velively izany hoe nitarika ny fandrobana ka nahatafiditra teto Madagasikara izany kolontsaim-pandrobana izany no hanana anjara fitantanana ny firenena ka mirary dia mirary izay hampandamoka ny fifanarahana aho (lasa extremiste ve aho amin'izany?). Matoa te-hanao io fitokonam-be etsy amin'ny kianjan'ny 13 mey io ny mpioko arahina sy anararaotan'ny mpandroba hanohizany ny reviny ny sabotsy 28 febroary 2009 dia mba ho fanehoan-kery hoe ka hanana vahana amin'ny fihaonana eo ambany fanaraha-mason'ny firenena mikambana mba hampiharana izao tetezamita izao. Mazava loatra fa toheriko izany tetezamita izany satria tsy hitondra mankaiza mihitsy. Any amin'ny tany mandroso hatrany ve no tena ampiharina ny lalàna rehefa misy mandroba sy mangalatra fa ny aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana tsy maintsy asiana fifanarahana mandrakariva? Anaovana kilalao tahaka izany mandrakariva ve ny vahoaka? tena tsy rariny kosa!
Vaka ny saina mahita ity fepetra napetraky ny arshevekan'Antananarivo vao manaiky ny hiverina hanelanelana izy. Hanaja ny teny nifanomezana ny mpifanandrina, malalaka ny fanehoan-kevitra izany hoe ny fahazoako azy dia tokony tohizana mandrakariva ny fihetsiketsehana an-dalambe ka mandrava ny tany amin'ny taratasy savaranon'ando nosoniavin'ny tenany ihany, ary ny tsy isiana fisamborana politika (na ny fahazoako azy dia ny tsy isamborana izay efa nikitikitika politika na dia efa nanao izay tsy mendrika nanapotika ny firenena na fananam-pirenena sy nanao fahotana mahafaty aza)! Koa raha izany no izy aleo mandamoka any ny fampifanatonana e! Ampihorohoroana mandrakariva izany ny olo-tsotra fa afa-manao izay danin'ny kibony hatrany ry zareo tsy menatra ny manapotika ny firenena? Tena tsy malagasy intsony aho izany manaiky ny zavatra tsy rariny toy izany! Rehefa manaiky ny hilefitra ka tsy hanao na inona na inona amin'io Asabotsy 28 febroary 2009 io ny filoha Ravalomanana amin'ny alalan'ny Emmo nat dia izay no izy ny aminy. Motraka izy ka aleo tsy mitondra tokoa ary miala avy hatrany!
Fitiavan-tena ve ny ahy raha miteny izany aho sa diso misolelaka loatra aho? Tsotra ny anton'izany! Manjakazaka loatra amin'ny atrehin'ny masoko ireo te-hitavana fotsiny ny hasasaran'ny hafa vao mahazo vola. Maninona raha mba misasatra sy mifofotra koa fa tsy manelingelina ny hafa e? Toy ny efa mitondra mihitsy ry zareo nahazo ity mpitolona ho amin'ny "demaokrasia" ity. Mampahatsiahy ahy ilay "fanjakan'ny madinika", nanararaotan'ny sasany hananganana ny TTS (tary Tonga Saina) handroba izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy. Hitahita taratra sahady ny tsirin'asa hataony amin'ny alalan'ny "fampihorohoroana" rehefa izy no hitondra fa mbola maro moa ny jamba tsy mahalala afa-tsy ny fanesorana an-dRavalomanana ho vahaolana ialàna amin'ny fahatrana, na dia miharihary izao aza fa mihatra manerana izao tontolo izao, indrindra ny tany tandrefana ny krizin'ny toe-karena sy ny vola, ary dia "manivaiva" ny "mpanaja ny ara-dalàna" ho tsy mahalala menatra ka tako-kenatra sisa no "hitafianay". Efa izay toe-tsaina tia manala olona izay no efa nahavoa taloha ka mbola tohizana hatrany. Izay tokoa ilay kinga amin'ny fandravana fa votsa amin'ny fananganana e!
Dia mihomehy aho mahita izao fivorian'ny mpitarika antoko politika izao ka mametraka an'i Andry Rajoelina ho "mpitarika" azy rehetra, mametraka an'ilay "tsy miankina" ho filohaben'ny fanoherana! Tadidinareo ve ny 2001? Tezitra dia tezitra tokoa ny filoha Nasionalin'ny Leader Fanilo Itpkl Herizo Razafimahaleo tamin'izany fotoana izany niteny hoe "Oviana koa no ny antoko politika indray no misintaka tsy hifaninana ka omena ny "tsy miankina" ny safidy?" rehefa nisintaka tsy hifaninana ny filoha Nasionalin'ny AVI (Asa Vita no Ifampitsarana ka rehefa hita fa nahavita be ny filoha Ravalomanana dia novaina indray ny anaran'Antoko ka natao hoe Akaikin'ny Vahoaka Indrindra). Dia izay teny izay ihany no atsidiko ny antoko Leader Fanilo ka ivereno vakiana fa tsy soratako intsony. Mieboebo manko ry zareo manao hoe "Izahay no voalohany nilaza fa tsy mety mihitsy io fomba fitantanan'ny filoha Ravalomanana io!". Fa manantena inona hatrany ary ry zalahy mpanao politika ireto? seza? fa angaha tsy nisara-kevitra rehefa nandeha ny fanendrena minisitra an-dalambe mpamaky ny trano-na Minisitera? Hay e efa niova filamatra ny Leader Fanilo ka mankasitraka indray ny fidinana an-dalambe e! iny indray no tsy hitako!
Farany, efa nabosako mandrakariva teto ny tokony handravana ny antenimieram-pirenena hanaovana fifidianana mialoha ny fotoana fa tsy ekeko velively kosa ny fifidianana filoham-pirenena mialoha ny fotoana fa dia niova ny hevitro ankehitriny. Mety ho mahasoa ny mpanohana an-dRavalomanana izany, satria tsy hankasitraka fandrobana sy fandoroan-trano ary fanendahana hihatra aminy velively ny olo-tsotra any Ambanivohitra rehefa izay no averimberina aminy mandritra ny fampielezan-kevitra (izay voa aza tezitra fa fandresen-dahatra hahomby io!) koa dia mihevitra aho hoe aleo ajanona fotsiny amin'izao, na dia matimaty foana aza ny maty tamin'ny tolona satria efa izany hatrany no nitranga hatramin'ny 1972, eny 1947 aza, no mankaty! Fahamarinana mandratra fo ny Besinimaro io nefa aleoko tsy mihatsaravelatsihy! Raha hisy manko ny fifidianana na fampielezankevitra dia tsy hisy raharaha ho vanona eto fa tena ady saritaka mivantana no ho hita. Ny fampihorohoroana manko no tena hanjaka fa tsy ny fampielezan-kevitra nefa tsy hisy hanaiky hampihorohoroana ny mpifanandrina, noho izany tsaratsara kokoa tsy misy fifidianana na fitsapa-kevi-bahoaka noho ity toe-draharaha ity. Tokana noho izany ny vahaolana hitako! Adabohy ny fikomiana! Fanamarihana: tsy mandatsa-dranomaso ihany ilay baomba nafarana avy any Shina fa mampangidihidy lozantany ihany koa... asa iza angaha no mety hahita ny fanefitr'ilay mampangidihidy? ( aza hitako mihaotraotra ny iray fiangonana rehefa tonga ny alahady! hiharihary ihany ny mpitolona mafana fo raha izany koa). Hevitro ho ahy samirery no tena nanaovako izao soratra izao nefa aleo zaraina ihany ho hitan'ny rehetra fotsiny.
jentilisa 27 febroary 2009